Wasiir Beyle oo digniin u diray ganacsatada aanan bixin canshuurta – Radio Daljir
Wasiir Beyle oo digniin u diray ganacsatada aanan bixin canshuurta
Febraayo 14, 2019 2:20 g 0
Wasiirka Maaliyadda Soomaaliya Dr Cabdiraxmaan Ducaalle Beyle, Wasiirka ayaa Maanta ka hadlay xaaladda dhaqaale ee Dalka, miisaaniyadda Sanadkan iyo caqabadaha ka taagan canshuur bixinta.
Wasiirka oo la hadlayay Saxaafadda ayaa digniin adag u jeediyay gacansatada aan bixin canshuurta lagu leeyahay, wuxuuna xusay in ay ka filayeen Sanadkan 20 milyan oo Doollar balse ay kasoo xerootay 14 milyan, taas oo tusaale u ah sida ay u yartahay canshuurta la qaado.
“ Hadii ay jiraan Toban canshuur bixiye waxa kale oo jira Labaatan aan bixin canshuur, Maanta kadib ma aqbalayno inaan canshuur la bixin , Dadka ay doodda inoo socoto ha bixiyeen canshuurta, idin magacaabi maayo Maanta laakiin marka xigto waxaan idiin sheegayaa Dadka Soomaaliyeed, waxaan ku kala baxaynaa sharciga oo ah mid midka inoo dhaxeeya “ ayuu yirri wasiirka Maaliyadda.
Maalinta Jacaylka (Valentine’s Day) iyo diinta islaamka waxay ka qabto?
Farmaajo la Kulmay Safiirada India iyo Nigeria Maxayse kawada hadleen? (Daawo)